Ny Lalao Olaimpika miaraka amin'ity fikitihan'ny anime an'ny firenena mpandray anjara ity | Famoronana an-tserasera
Herintaona sisa tavela mandra-pisokafan'ny Lalao Olaimpika ao Tokyo. Fanendrena izay efa miomana amin'ny fanoharana andian-dahatsoratra Mpanakanto japoney izay namerina nandinika indray ho an'ireo firenena sy ny sainam-panahin'izy ireo ho endri-tsoratra anime.
Saika adidy ny nanana an'ity tolo-kevitra ity satria io no teny fiambenana manga sy anime an'ny firenena Japoney. Lalao Olaimpika izay hatao any Tokyo ary amin'izany ny teoria fikomiana dia tsy ampy noho ny lohahevitr'ilay manga sy ny sarimihetsika Akira.
Mpanakanto Japoney vitsivitsy no namorona a fampielezana fanentanana tsy ofisialy ho an'ny hetsika Olaimpika lehibe izay hatao any Tokyo amin'ny taona ho avy.
Ary afangaro ny JLalao olympika misy anime sy manga satria toa tsara sy tena izy io. Noheverin'izy ireo ho firenena henjana indrindra hiadiana amin'ny lalao Olaimpika ireo firenena mpandray anjara.
Mazava be, araka ny hitanao, izany Japoney be ireo mpilalao ary ahafahan'ny tsirairay mahita ny kolontsaina, ny tantara ary ny mombamomba ny firenena izay mifanaraka amin'ny firenena tsirairay.
Inona no mamorona sary sy tarehin-tsoratra marobe izay mahafinaritra azy. Maherin'ny 30 izy ireo, ka avelanay miaraka amin'ny tranonkala ahafahanao mahita azy rehetra ianao. Eto dia manana ny tranonkala ianao izay ahitanao azy, soa ihany ny firenenao. Eo i Espana ary amin'ny fomba ahoana no hisy an'izany raha tsy izany dia azonao an-tsaina izany.
Manoro hevitra an'izany izahay mandehana amin'ny Internet mba hahitanao ireo firenena sisa. Fihaonana tsy azo ihodivirana ho an'ireo mpankafy manga sy ireo izay manana fanatanjahan-tena ho iray amin'ireo fialambolin'izy ireo.
Tsy nisy foana ny fandraisana andraikitra tahaka izany hitondra antsika amin'ny toetran'ny Harry Potter dia nanao an'io sary io tena hafahafa avy amin'ny firenena Japoney.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo mpanakanto Japoney dia manome endrika sary an-tsaina ireo firenena sy ny sainam-panahin'izy ireo ho endri-tsoratra anime